Kuwa Ugu Caansan Ee Guba Shaqada | Ragga Stylish
Dadka bilaabaya bikini ee raba inay baruurta lumiyaan, waxa ugu horeeya ee ay sameeyaan waa inay ku xadidaan cunnooyinkooda dhowr cunno "caafimaad leh" oo ay iibsadaan waxa loogu yeero gubida dufanka. Waxaa jira noocyo aan dhammaad lahayn oo gubidda dufanka mid walbana wuxuu sheeganayaa inuu wax ka qabanayo qayb ka mid ah dhaqdhaqaaqa dufanka ku jira unugyada adipose. Si kastaba ha noqotee, imisa ka mid ah ayaa runtii waxtar leh? Waxaan ogaan karnaa in warshadaha jirdhiska ay nagu duqeeyaan nafaqeyn iyo wax soo saar sameeya waxyaabo yaab leh oo ku saabsan jirkeena waana ilaawnaa inaan diirada saarno aasaasiga.
Qodobkaan waxaan kuugu sharaxeynaa kuwa ugu fiican kuwa guba dufanka iyo inay si fiican jirka ugu shaqeeyaan.
1 Maxay qabtaan baruurta gubta
4 Soosaarida shaaha cagaaran
Maxay qabtaan baruurta gubta
Waxa ugu horreeya ee la ogaado waa in kabku aanu qabanayn shaqada baabiinta dufanka jidhka keligiis. Tani ma ahan tan. Cunto fiican iyo saldhig jimicsi ayaa tan loogu baahan yahay. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad ku jirto hoos u dhaca kalooriga. Taasi waa, isticmaal kalooriyaal kayar inta aan kharash gareyno maalintii oo dhan. Haddii yaraanta kalooriyadan la sii wado waqti ka dib, dufanka oo yaraada ayaa bilaabmi doona inay dhacaan. Dhinaca kale, cilladan waa in lagu taageeraa tababarka culeyska.
Jidhkeenu wuxuu u muuqdaa inuu baabi’inayo muruq maaddaama ay tamar ahaan qaali tahay. Haddii aynaan jidhka siin sabab ay ku ilaaliso cufnaanta muruqyada, jidhku wuxuu daadin doonaa murqo ee ma cayili doono. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la helo cunto kugu filan oo kaa dhigeysa inaad ku jirto hoos u dhac kaloriin iyo tan labaad, Ku weheliso tababar xoog leh. Haddii aynu lumino cufnaanta muruqyada oo aynaan dufan lahayn, waxaynu ogaan doonnaa jidhkeenna jilicsanaan badan iyo cod aad u dhuuban.
Ugu dambeyntiina, heerarka horumarsan ee dufanka lumay, halkaasoo ay aad ugu adkaato in la sii horumariyo, waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay in la soo bandhigo kaabis ku saleysan baruurta gubta nolosheena maalinlaha ah. Laakiin dhabta gubta dufanka iyo waxa shaqeeya. Waxyaabo badan oo dheeri ah, gaar ahaan kuwa kuleylka leh, waxay sheeganayaan inay sare u qaadayaan heerkulka jirka si ay u dhidid badan isla markaana u gubaan kalooriyo badan nasashada. Tani gebi ahaanba waa been.
Ilaa hadda, waxyaabaha keliya ee dufanka guba ee run ahaantii leh taageero cilmiyaysan oo ay ku shaqeeyaan waa saddex: kafee, synephrine, iyo soosaarida shaaha cagaaran. Waxaan mid mid u falanqeyn doonnaa si faahfaahsan si aad wax badan uga baratid.
Caffeine waa alkaloid ka tirsan qoyska xanthine. Waxyaabaha ay ku leeyihiin jirka iyo hagaajinta gubashada dufanka waxaa u sabab ah saameynta ay ku reebayso habka neerfaha. Caffeine-ka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay nooc daroogo ah, maaddaama dadku ay balwad ku yeeshaan. Si kastaba ha noqotee, haddii aan rabno in saameynteeda laga dareemo dufanka gubanaya, kama qaadan karno kafeyn maalin kasta Tani waa sababta oo ah jidhkeenu wuxuu noqdaa mid dulqaad leh waxaanan u baahanahay xaddi badan iyo ka badan oo kafeyn ah si loo helo saameyn isku mid ah. Sidan oo kale, dhibaatooyinka soo raaca waxay u badan tahay inay ku dhacaan jirka waana waxa aynaan rabin.
Caffeine wuxuu saameyn ku yeelan karaa niyaddaada. Qiyaasta ugu badan ee lagula taliyay dadka caafimaadka qaba waa inta u dhexeysa 400 iyo 600mg. Marka laga reebo inuu yahay kiciyaha nidaamka dhexe ee neerfaha, waxay ku dhaqaaqdaa kordhinta wadnaha iyo heerka neefsashada. Waxay sidoo kale leeyihiin saameyn dura oo kaa caawinaysa ciribtirka dareerayaasha.
Looma isticmaalo oo kaliya kiciya ahaan, laakiin waa loo isticmaalay hagaajinta waxqabadka cayaaraha, ka caawinta dufanka oo lumiya iyo in diiradda la saaro howlaha garashada. Waxaa lagu qiyaasaa in kafeynku sida caadiga ah uu ku dhexjiro jirkeena inta udhaxeysa 4 iyo 6 saacadood illaa ay qaadaneyso in si buuxda loo shiido. Waxay kuxirantahay xasaasiyadda qof walba u leeyahay kafeyn, waqtigan wuu kala duwan yahay.
Dheeraadkan waxay bilaabmaysaa inay dhaqan gasho ilaa 45 daqiiqo ka dib markii la liqo. Sidaa darteed, tan ugu caansan waa in la cuno saacad ka hor intaadan aadin jimicsiga si ay u tababarto. Sidan oo kale, waxaan ku kasbaneynaa dhammaan saameynta wanaagsan ee suurtagalka ah ee gubashada dufanka badan inta tababarka iyo xoojinta waxqabadka jimicsiga.
Synephrine waa maaddada ugu weyn ee firfircoon laga helay liin dhanaan. Diirka liinta noocan oo kale ah ayaa la muujiyay inuu leeyahay saameyn caafimaad. Waa walax dabiici ah oo kicisa nidaamka neerfaha. Waxay si dhib leh u leedahay waxyeellooyin waxyeello leh. Waxay keenaysaa dufan lumis, yaraynta rabitaanka cuntada iyo hagaajinta waxqabadka cayaaraha. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawineysaa sidii loo ilaalin lahaa unugyada muruqyada xitaa haddii aan ku jirno xaalado tamar yaraanta.
Ka mid ah faa'iidooyinka aan ka helno synephrine waxaan leenahay taasi waa daawo dabiici ah waxayna keentaa baruur lumis. Waxay kordhisaa dheef-shiid kiimikaadka asalka ah waxayna yareyneysaa rabitaanka cuntada. Waxa ugu fiican ee ku saabsan kaabiskan ayaa ah in, inkasta oo ay kicineyso, aysan saameyn ku yeelan doonin garaaca wadnaha. Tani waxay muujineysaa in koox dad ah oo badani qaadi karaan. Marka laga hadlayo kafeega, dadka qaba garaaca wadnaha oo la dedejiyay, isticmaalkiisa laguma taliyo haba yaraatee. Synephrine wuxuu si firfircoon ula shaqeeyaa kafeyn. Taasi waa, haddii aan qaadanno labadan kaabis isku mar, saameyntooda isku dhafan ayaa ka badan tan mid walba gooni u gaar tahay.
Tani waa sababta synephrine iyo caffeine ay tahay isku darka ugu fiican ee ilaa iyo hada la isticmaalo. Kaliya waa inaad ku ciyaartaa qiyaasaha iyo tallaalada si jirku uusan u abuurin dulqaad oo aan uga faa iideysano inta ugu badan.
Soosaarida shaaha cagaaran
Shaaha cagaaran wuxuu leeyahay polyphenols iyo kafeyn ka kooban. Daraasadaha ayaa muujinaya in dadka qaatay Soosaarida shaaha cagaaran ayaa ka lumay 1,3 kiilo oo ka badan kuwa qaata kaniiniyada placebo Waxyaabaha ay ka kooban tahay kafeega ayaa sidoo kale waxay ka caawineysaa kicinta habka dhexe ee neerfayaasha, taasoo keenta in dufanka loo isticmaalo ilaha shidaalka maalintiina.
Sidaad u aragto, waxaa jira waxyaabo dheeri ah oo dufanka luma, laakiin kuwa gubta dufanka waxay shaqeeyaan oo keliya haddii cuntada iyo xarumaha tababarka la daboolayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Kuwa wax gubaya